मतदानको समय सकियो, मत कहाँ कति खस्यो ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मतदानको समय सकियो, मत कहाँ कति खस्यो ?
पहिलो चरणको उल्लास सकियो, अब नतिजाको प्रतिक्षा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दिएको मतदानको समय सकिएको छ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदाताले मतदान गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तरगत ३४ जिल्लामा जारी मतदान अपरान्हसम्म ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मत खसेको छ । अधिकांस ठाउँमा मतदान सकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७० प्रतिशत मत खसेको अनुमान गरेको छ । मतदान सकिँदासम्म आयोगमा प्राप्त जिल्लागत विवरणका आधारमा आयोगले ७० प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकर प्रयोग गरेको बताएको हो ।
केही ठाउमा सामान्य झडप र सामान्य अवरोध भए पनि अधिकाँस ठाउमा मतदान शान्तिपुर्ण रुपमा भएको छ ।
काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाअन्तर्गतको एउटा मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्यमा अवरोध भएको थियो भने दोलखा र दैलेखमा पार्टीहरुबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोल्ी चलाउनु परेको छ । एक जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको छ । रसुवा र स्याङ्जा र नवलपरासीमा ६५ प्रतिशत मत खसेको छ